/g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); }); လင္းဦး(စိတ္ပညာ) _ Lin Oo: ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ ကျွန်ေတာ့်အြမင်( ၁၅ )
ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ ကျွန်ေတာ့်အြမင်( ၁၅ )
ကျွန်ေတာ်ဒီေဆာင်းပါးကို ေရးဖို့ ေတာ်ေတာ်းေလး စဉ်းစားခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ဟာ ြမန်မာ လူမျိုးတစ်ေယာက်၊ ေခတ်ေနာက်မဆွဲသလို၊ ေခတ်နဲ့ အညီ လိုက်ေနတဲ့သူ တစ်ဦးပါ။ သို့ေသာ်လည်းပဲေပါ့ေလ။ အချို့ေသာ သူများက ေခတ်ေနာက်ကျေနသူ အြဖစ်၊ ေရှးရိုးစွဲအြဖစ် ြမင်ေနြကပါတယ်။ ကျွန်ေတာ် အချက်နှစ်ချက်ကို ေရးသားတင်ြပမှာပါ။ ပထမက မိန်းကေလးေတွကိုယ်တိုင် ဆင်ြခင်ဖို့။ ဒုတိယကေတာ့ အုပ်ထိန်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ြပီး တင်ြပသွားမှာပါ ။
ကျွန်ေတာ်တို့ ြမန်မာမိန်းကေလးေတွဟာ အိေြန္ဒြကီးြကပါတယ်။ အခုေတာ့ ဒါေတွဟာ ေတာ်ေတာ်များများ ေြပာင်းလဲကုန်တာ သတိထားမိြကမှာပါ။ အခု ဆယ်ေကျာ်သက် မိန်းကေလးများဟာ ကိုးရီယားစတိုင်များကို နှစ်သက် ၀တ်ဆင်တာကို သေဘာကျတာကို ေတွ့ရမှာပါ။ ဒါ့ထက် မိန်းကေလးတစ်ေယာက်ဟာ ေယာကျ်ားတစ်ေယာက်ကို ချစ်ေရးဆိုခွင့် ရိှတယ်၊ မိန်းကေလးတစ်ေယာက်ဟာ သူ့လုပ်ပိုင်ခွင့် ၊ ေြပာပိုင်ခွင့် ရိှတယ်၊ အခွင့်အေရးရိှတယ် ဆိုတာကို လက်ခံလာြကတာကို ေတွ့ရပါတယ်။ အရင်တုန်းက ြမန်မာ မိန်းကေလးများဟာ ကိုယ်ချစ်တာကိုေတာင်မှ ဖွင့်မေြပာြကပါဘူး။ တစ်ဖက်ရဲ့ ဖွင့်ေြပာချက်ကို ြကိုလင့် ေစာင့်ေမှျာ်ေနြကတာပါ။ အခုေတာ့ သူတို့က ေစာင့်ေမှျာ်သူ မလုပ်ချင်ြကေတာ့ပါဘူး။ ဒီအချက်မှာ ကျွန်ေတာ့်အထင်ေြပာရရင် ကိုရီးယားကားများရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု၊ သူတို့ရဲ့ ဓေလ့စရိုက်နဲ့ စတိုင်များကို အတုယူလာြကတာပါ။ ဘယ်ေလာက်ထိလဲဆိုရင် ြမန်မာမိန်းကေလးေတွမှာရိှတဲ့ အိေြန္ဒ သိက္ခာကိုေတာင်မှ အကျခံေနြကပါတယ်။ ဒါဟာ ြမန်မာေတွအေနနဲ့၊ ြမန်မာလူမျိုးေတွအေနနဲ့ လက်မခံသင့်ေတာ့ပါဘူး။ ကျွန်ေတာ်လည်း လံုး၀ကန့်ကွက်ေြကာင်း ေြပာလိုပါတယ်။ ြပီးေတာ့ ဒါနဲ့ပတ်သက်ြပီး ေြပာလိုတာကေတာ့ ြမန်မာြပည်မှာ ေြပာစမှတ်ြပုြက၊ ေြပာေနြကတဲ့ စကားေတွပါ။ ေယာကျ်ားေလးေတွရှားေနတဲ့ေခတ်၊ မိန်းကေလးေတွ ေပါေနတဲ့ေခတ်၊ ေယာကျ်ားေလးေတွဟာ ဆန်ထုပ်ပိုက်ြပီး ပုန်းေနရမယ်တဲ့။ ဒါကိုသာ လက်ခံေနြကရင်ေတာ့ မြဖစ်သင့်တာေတွ ြဖစ်လာေတာ့မှာေပါ့။ မိန်းကေလးေတွ အေနနဲ့လည်း စိုးရိမ်စိတ်ေတွ မရိှသင့်ပါဘူး။
ြပီးေတာ့ မိန်းကေလး အများစုက ကိုယ့်အေပါ် ေယာကျ်ားေလးေတွ စိတ်၀င်စားတာကို ဂုဏ်ယူေလ့ရိှတယ် မဟုတ်လား။ အဲ့ဒါကို သူတို့ အန္တရာယ်မှန်း မသိြကတာပါ။ တကယ်တမ်းေြပာရရင် ေယာကျ်ားဟာ ေယာကျ်ားပါပဲ။ ကျားဟာ ကျားပဲ ။ ကျွန်ေတာ်ဆိုလိုတာကို သေဘာေပါက်မှာပါ။ ယေန့ေခတ် ရည်းစားများတဲ့ မိန်းကေလး တစ်ေယာက်ဟာ အပျိုြဖစ်နုိင်ေသးလား။ ဒါ ကျွန်ေတာ် ေစာ်ကားတာ မဟုတ်ဘူး။ တကယ်ြဖစ်ေနတာေတွ။ ြမန်မာြပည်မှာ တကယ်ြဖစ်ေနတာေတွပါ။
ယေန့ ြမန်မာနိုင်ငံမှာ ပိုက်ဆံရိှရင် ဘာမဆိုြဖစ်တယ်ဆိုတာကို လက်ခံလာြကပါတယ်။ ဟိတ်လူ ြမန်မာမှာ မကဘူး၊ ကမ္ဘာေပါ်မှာ အားလံုးြဖစ်ေနြကတာလုိ့ ေြပာြကမှာပါ။ ကျွန်ေတာ် ကမ္ဘာနဲ့ချီြပီး မေြပာပါဘူး။ အခုဆိုရင် ေငွမှေငွြဖစ်ေနြကတယ်။ တကယ်လည်း ေငွက အေရးြကီးေနတယ်။ အကျင့် စာရိတ္တပိုင်းေတွ ထည့်မတွက်ေတာ့ဘူး၊ မတရားတာေတွ တရားတာေတွ ထည့်မတွက်ေတာ့ဘူး၊ ေငွရဖို့ အဓိက ြဖစ်ေနြကြပီ။ အဲ့မှာ စြပီး မိန်းကေလး ေတာ်ေတာ်များများ ပျက်စီးြကေတာ့တာပါပဲ။ ကာရာအိုေကဆိုင်ေရာက်ကုန်တယ်။ ဘီယာဆိုင်ေရာက်ကုန်တယ်။ အနှိပ်ခန်းေတွ ေရာက်ကုန်တယ်။ နယ်ကေန ရန်ကုန်လာြပီး အလုပ်လုပ်ရတယ်။ တစ်ချို့ မိဘေတွဆိုရင် ကိုယ့်သမီးေလး အလုပ်လုပ်တယ်ပဲသိတယ်။ ဘာလုပ်သလဲ၊ ဘာေတွြဖစ်ေနသလဲ ဆိုတာ မသိြကဘူး။ တစ်ချို့ မိန်းကေလးေတွက ေငွရလွယ်တာကို ရှာြကတယ်။ ပညာတတ်ြကရဲ့သားနဲ့ လုပ်ြကတယ်။ တစ်ချို့မိန်းကေလးေတွကျေတာ့ တကယ့်ကို သနားဖို့ေကာင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ထက် အငယ်ေတွ ညှာြပီး လုပ်ြကရတာေတွ ရိှတယ်။ ကိုယ်ပိုက်ဆံများများရှာနိုင်မှ အငယ်ေတွ ေကျာင်းထားနိုင်မယ်၊ အိမ်ကို ေထာက်ပံ့နိုင်မယ်။ အနစ်နာခံြပီး လုပ်ေနြကတယ်။ ဒီေခတ် ကုန်ေဈးနှုန်းကလည်း ဘယ်လိုမှ မလုိက်နိုင်ဘူး။ ဒါေတွဟာ တကယ်ြဖစ်ေနြကတာပါ။ တကယ်ကို လုပ်ေနြကတာပါ။ တကယ်ကို ကိုယ့်ညီမေလးေတွလို ကိုယ်ချင်းစာြကည့်ပါ။ လက်ခံနိုင်ပါ့မလား။
ေယာကျ်ားေလးေတွက ေြပာြကပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့က ေပျာ်ချင်လို့သွားတာ။ ကျွန်ေတာ်တို့ ပိုက်ဆံေပးတယ်။ သူတို့က စိတ်ေကျနပ်မှုေပးရမယ်။ ဒါဟာ သံုးေနကျ စကားေတွပါ။ တကယ်လည်း မှန်ပါတယ်။ ယခု နိုင်ငံတကာမှာလည်း ဒီလို ေနရာေတွ ေပါမှေပါပဲကိုး။ အဲ့ေတာ့ ကျွန်ေတာ်ေြပာတာေတွက ကျွန်ေတာ့် အလွန်လို့ပဲ ထားပါ။
ကဲ .... ဒါဆုိ ကျွန်ေတာ် ဆက်ြပီး ေြပာလို့ ေရးလို့ ရဦးမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အခုဆက်ေြပာချင် ေရးချင်တာကေတာ့ မိဘေတွကိုပါ။ အသိတရား ေပးချင်တယ်။ အဲ့ေတာ့ ေမးြကပါဦးမယ်။ ခင်ဗျားက အသိတရားေပးရေအာင် ဘယ်ေလာက် အေတွ့အြကံုရိှလို့လဲေပါ့။ ဟုတ်ကဲ့.... ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ေြပာရရင် အသက်သာြကီးသွားေပမယ့် အသိတရား မရိှသူေတွ အများြကီး၊ မဆံုးမတတ်သူေတွ အများြကီးပဲ။ စာဖတ်သူ မိတ်ေဆွများ ဒီအချက်ကို လက်ခံတယ်ဆိုရင်ေတာ့ ဆက်ဖတ်ပါ။
မိဘဆိုတာထက် သမီးမိန်းကေလးကို ထိန်းေကျာင်းသူကေတာ့ အေမပါ။ အေမဟာ ကုိယ့်သမီးကို ကိုယ် သွန်သင်ြပတတ်ရမယ်။ ဒါဟာလည်း တကယ်ေြပာရရင် ပညာရပ်တစ်ခုပါ။ ဒါနဲ့ ေြပာရပါဦးမယ်။ ကျွန်ေတာ် မိန်းမကျမ်း ေရးေနတာ မဟုတ်ဘူးေနာ်။ ြဖစ်ေနတာေတွ၊ ြဖစ်သင့်တာေတွကို ေရးေနတာ။ ေငွဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရကို နားလည်ေအာင် ေြပာသင့်တယ်။ ေငွဆိုတာ ဘယ်ေလာက် အသံုး၀င်လို့လဲ။ ဘယ်အတိုင်းအတာထိလဲ။ ေငွကို ေရလဲ သံုးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သူေတွ တကယ်ေကာ ြပည့်စံုြကရဲ့လား။ စိတ်ဆင်းရဲစရာေတွ ရိှမယ်။ ဘ၀ဆိုတာြကီးနဲ့ လူြဖစ်လာရတဲ့သူက ေငွဆိုတဲ့ စကားလံုးေအာက်မှာ လည်စင်းခံြပီး ၀ပ်ေနသင့်သလား။ စဉ်းစားြကပါ။ ေငွကို ဘယ်လိုရှာရမှာလဲ။ စိတ်ဓါတ်ကို ဘယ်လိုြမှင့်တင်ရမလဲ။ ဒါေတွကို မိဘေတွက ကိုယ့်သားသမီးကို ေြပာြပသင့်တယ်။
ကျွန်ေတာ်ေတွ့ဘူးတဲ့ မိဘရဲ့ အုပ်ထိန်းမှုတစ်ခုကေတာ့ သားသမီးကို ပိုက်ဆံေပးတယ်။ ပိုက်ဆံကိုမှ ေတာ်ေတာ်များများကို ေပးတာ။ တစ်ပတ်စာေလာက် တစ်ခါတည်းေပးထားတာ။ ပိုက်ဆံဘာလို့ အဲ့သေလာက်ေပးတာလဲလို့ ေမးေတာ့၊ ပိုက်ဆံဆိုတာ များများသံုးမှ၊ များများရှာတတ်မယ်၊ ပိုက်ဆံ ဘယ်လို အသံုး၀င်လဲဆိုတာသိမှ သူတို့ ရှာမှာေပါ့တဲ့။ ဒါဟာ နားလည်မှုတစ်ခု၊ အယူအဆတစ်ခု ၊ သူ့ေကာက်ချက်နဲ့သူ ထိန်းေကျာင်းေနတာ။ အဲ့ဒီ အယူအဆ၀င်သွားတဲ့ သူေတွ ဘာဆိုးကျိုးေတွ ြဖစ်လာမလဲဆိုတာ မိဘေတွ နားမလည်တာလား ။ ဒါဟာ မှားယွင်းတဲ့ ထိန်းေကျာင်း ြပုြပင်မှုလို့ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ယူဆတယ်။ စာဖတ်သူများ အေနနဲ့ေကာ လက်ခံပါသလား။
ေနာက်မိဘကျေတာ့ ဘယ်လုိအုပ်ထိန်း သလဲဆိုေတာ့..... သူ့သမီးေလးက အခုမှ (၉)တန်း ေကျာင်းသူပဲ ရိှေသးတယ်။ ရည်းစားက အရမ်းများတယ်။ တစ်ေန့ ေကျာင်းက တိုင်စာပို့တယ်။ ေကျာင်းပျက်ရက် များလာလို့။ ေကျာင်းကို ပံုမှန်မတက်ဘူး။ အဲ့ေတာ့ အေမက ေကျာင်းကိုလိုက်သွားတယ်။ ေကျာင်းအုပ်ြကီးက ရံုးခန်းမှာ ေခါ်ေတွ့တယ်။ ေြပာြပတယ်။ သူ့သမီး ေကျာင်းတက် မမှန်တာကိုေပါ့။ ေနာက်တစ်ခါဆိုရင်ေတာ့ သတိမေပးေတာ့ဘူး။ အဲ့အချိန်မှာေတာ့ ဒီအမျိုးသမီးက ဘာမှ မေြပာေသးဘူး။ အိမ်လည်း ြပန်ေရာက်ေကာ ဆဲဆုိေတာ့တာပဲ။ သူ့သမီးကို ဆံုးမေနတာ။ ကဲ... ဘယ်လို ဆံုးမ ေနသလဲဆိုေတာ့...ဘာြဖစ်လဲ၊ ရည်းစားများတာ၊ အကယ်လို့ ကိုယ်၀န်ရိှလာရင်လည်း ဖျက်ချရံုေပါ့၊ ဘာအေရးလဲတဲ့။ စဉ်းစားတာြကည့်ပါေတာ့ဗျာ။ ဒီလိုမျိုး ဆံုးမေနတာ။ သူ့ကို ေကျာင်းက ေခါ်တယ်ဆိုတာ ပတ်၀န်ကျင်ကလည်း သိတယ်။ သူက ပတ်၀န်းကျင်က လူေတွကိုပါ ေစာင်းေြပာေနတာ။ ေယာကျ်ားက တက္ကစီ ေမာင်းတယ်။ ေယာကျ်ားက ပင်ပန်းပန်း အိမ်ြပန်လာတယ်။ အိမ်ေရာက်ေတာ့ သမီးသတင်းြကားေတာ့ ေဒါသထွက်တာေပါ့။ အဲ့ေတာ့ သမီးကို ရိုက်တယ်။ အေမက ေရှ့က ကာတယ်။ ေနာက်ဆံုး ေကာင်မေလးက အိမ်ကေန ထွက်ေြပးတယ်။ ေကာင်မေလးက သူ့ကျူရှင်ဆရာအိမ်ေြပးလို့ ေတာ်ေသးတာေပါ့ဗျာ။ တြခားေနရာေတွဆိုရင် မလွယ်ဘူး။ ဒီလို သွန်သင်ဆံုးမမှုကို စာဖတ်သူများ သေဘာကျရဲ့လား။
ေနာက်ထပ်တစ်ခုကေတာ့ မိဘက သာယာေနတယ်လို့ ေြပာရမယ်။ သမီးေလးက အခု (၁၀)တန်း ေြဖြပီးသွားြပီ။ အဲ့ေကာင်မေလးမှာ ရည်စားရိှတယ်။ သူတို့ ရပ်ကွက်ကပါပဲ။ ေကာင်ေလးက ဒုတိယနှစ်တက်ေနြပီ။ ဒါေပမယ့် ခက်တာက မိဘ။ သူ့သမီးကို ြကိုက်တဲ့သူေတွက များတယ်။ အဲ့ေတာ့ ဟုိက လက်ေဆာင်ေပးလိုက်၊ ဒီကလက်ေဆာင်ေပးလိုက်နဲ့။ ဒီလိုပဲ စားေနတယ်။ ကဲ ... သမီးေလးက ရှက်တာေပါ့။ သူက လက်ခံသူလည်း မဟုတ်ဘူး။ အဲ့လိုမျိုး ေပးလာရင်လည်း လက်မခံဘူး။ မိဘက လက်ခံေနတာ။ သူတို့က အိမ်ငှားေနရတယ်။ သူ ဆယ်တန်းေအာင်ြပီ။ သူ့မှာ ရည်မှန်းချက်ေတွ ရှိတယ်။ အလုပ်ထွက်လုပ်တယ်။ ခက်တာက ြမန်မာနိုင်ငံမှာ ဆယ်တန်းေအာင်ေပမယ့် အလုပ်ေတာ်ေတာ်များများက လက်မခံဘူး။ ဘွဲ့ရေတာင် အလုပ်က ရှားေနတယ် မဟုတ်လား။ သူဘာလုပ်သလဲဆိုေတာ့ မုန့်တုိက်မှာ အလုပ်၀င်လုပ်တယ်။ ဒါေပမယ့်လည်း ပိုက်ဆံက မစုမိဘူးေလ။ သူ့အစ်ကိုကလည်း အိမ်ေထာင်ကျေနြပီ။ တစ်ေန့ သူ့အိမ်ကို အသက်(၅၀)အရွယ် ဦးေလးြကီး ေရာက်လာတယ်။ ေကာင်မေလးကို လက်ထပ်ခွင့်ေတာင်းတယ်။ အဲ့ေတာ့ ေကာင်မေလးက ြငင်းေပမယ့် မိဘေတွက မရဘူး ယူရမယ်။ ဒီလူြကီးက ေရွှဆုိင်ပိုင်တယ်။ အြခားအလုပ်ေတွလည်း ရိှတယ်။ သူ့မိန်းမက ဆံုးသွားတာြကာြပီ။ သူ့မှာ သားတစ်ေယာက် ရိှေသးတယ်။ သူ့သားက ေကာင်မေလးထက်ေတာင် အသက်ြကီးေသးတယ်။ မိဘက အတင်းေပးစားေတာ့ ဒီလူြကီးကို ယူလိုက်ရတယ်။ ဒီလူြကီးက သူ့မိဘေတွကို ေထာက်ပံ့တယ်။ ေကာင်မေလးက သူ့မိန်းမြဖစ်သွားြပီ။ ဒီလူြကီးရဲ့ အေြကာင်းေတွ သိလာြပီ။ ဒီလူြကီးက ဘာလုပ်သလဲဆိုေတာ့ ေကာင်မေလးေတွကို ေမွးစားထားတာ။ သူ့ဆီကို ဖုန်းဆက်ြပီး ချိန်းလို့ရတယ်။ အဲ့လိုမျိုး။ စာဖတ်သူေတွလည်း ြကားဖူးမှာေပါ့။ အဲ့လိုမျိုး အလုပ်လုပ်တာ။ ဒီ ေကာင်မေလးကိုလည်း အဲ့လို လုပ်ခို်င်းတယ်။ တစ်ခုပဲသာတယ်။ သူ့ တရား၀င် မိန်းမအြဖစ် ယူထားတာတစ်ခုပဲ။ ေနာက်ေတာ့ ေကာင်မေလးရဲ့ မိဘေတွက သိသွားေတာ့ သူတို့မှားမှန်းသိသွားေကာ။ အစကတည်းက ဒီလူြကီးရဲ့ ေနာက်ေြကာင်းကို စံုစမ်းရမယ်။ ကိုယ့်သမီးယူရမယ့် ေယာကျ်ားအေြကာင်းကို စံုစမ်းဖို့ မိဘမှာ တာ၀န်မရိှဘူးလား။ ဒါဟာ အုပ်ထိန်းသူေတွရဲ့ ချို့ယွင်းချက်ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။
ကျွန်ေတာ်ဟာ အရိုးသားဆံုးနဲ့ ေစတနာထားြပီး ေရးေနတာပါ။ ဒါကို နားလည်ဖို့ေတာ့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ြမန်မာမိန်းကေလး အများစု ြဖစ်ပျက်ေနတာကို ြကည့်ရင် ဘယ်ေလာက် ရင်နာစရာေကာင်းလဲ။ ဘယ်ေလာက် စိတ်မချမ်း မသာ ြဖစ်ရလဲ။ တကယ်ေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ေတွ ြဖစ်တည်လာတဲ့ ဒီလူ့ဘ၀ြကီးမှာ အေကာင်းဆံုး ၊ အရိုးသားဆံုး၊ သိက္ခာရိှရိှနဲ့ ေနထိုင်သွားသင့်ပါတယ်။
Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Wednesday, May 21, 2008
မှန်တယ်ဗျုိ့ .. ကိုလင်းဦးေကာ ေကာင်မေလးေကာ... း၁)
ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်တာကေတာ့ မိဘေတွဘယ်ေလာက် ေကာင်းေကာင်း / ေတာ်ေတာ် သားသမီး (အထူးသြဖင့် ဒီပို့စ်ဟာ မိန်းကေလးေတွကို ညွှန်းတာဆိုေတာ့ သမီးေပါ့ဗျာ) ရဲ့ ဉာဉ် နဲ့ ဗီဇ ကိုေတာ့ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်။ ဒီအတွက် ေခတ်ေနာက်ကိုလိုက်ေနတဲ့ (စိတ်သွားရာ ကုိယ်ပါေနတဲ့) မိန်းကေလးေတွဟာ အတုြမင်အတတ်သင်လွယ်ေနတဲ့ ေလာကြကီးထဲမှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပဲ့ကိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင် လူေတာ်လူေကာင်းြဖစ်လာမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ြဖစ်လာြပီးမှ ေြပာေနဆိုေနရုိက်နှက်ြကိမ်းေမာင်းေနတာထက် စာရင် မြဖစ်ခင်ကတည်းက ေြပာဆိုညွှန်ြပြကရင်ေကာင်းတာေပါ့။ (ဒါေပမယ့် လူဆိုတာက ထိမှနာမှ ေြကာက်ရေကာင်းမှန်းသိတာ)
ကိုလင်းဦးရဲ့ေစတနာကို နားလည်ပါတယ်။ သို့ေသာ်လည်း အ၀ိုင်းဆိုတဲ့ေလာကြကီးထဲကို လူေတွက ေလးေထာင့်အြဖစ်၀င်လာြကတာဆိုေတာ့ ေလးေထာင့်ကိုပဲတိုက်စားြပီး အ၀ိုင်းထဲ၀င်မလား၊ အ၀ိုင်းကိုပဲေလးေထာင့်ြဖစ်ေအာင် ြကံေဆာင်ြပီး၀င်မလားဆိုတာ လူေတွအေပါ်မှာပဲ ြကည့်ရပါေတာ့မှာပဲေလ....
ဦးေစာဘဲွ့မှူးေရးခဲ့ဖူးတဲ့ သီချင်းကိုပဲ ဟစ်လိုက်ချင်ေတာ့တယ်...
`ချစ်သူေလးရဲ့ ပုခံုးဆီမှာ လက်သည်းချက်များေတွ့ေန... ေမာင်လက်သည်းအရှည် မထားတတ်မှန်းကို ေမာင်ပဲ အသိဆံုးပါေလ... ဘာအတွက်၊ ဘာေြကာင့်...´ ဟိုးတုန်းက သီချင်းေလးက အခုထိ မှန်ေနေသးတာ ဘာေြကာင့်လည်းဆိုတာေတာ့ ကျွန်ေတာ်လည်း မေြပာတတ်ေတာ့ဘူး။ အရင်ကအတိုင်းပဲ ကျွန်ေတာ်တို့ တိုးတက်မလာေသးလို့လား။
ေနာက်ြပီးေတာ့ နိုင်ငံတကာမှာ ဒီလိုြဖစ်ေနတာပဲလို့ တထစ်ချ ေြပာလို့မရပါဘူး။ ဥပမာ အဲလို ဘာညာကိစ္စေတွနဲ့ နာမည်ေကျာ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံပဲဆိုပါေတာ့ နိုင်ငံလူဦးေရ လူအနည်းစုသာ အဲလိုအလုပ်မျိုးလုပ်ြကတာပါ။ ထိုင်းမှာ ပညာတတ်ဆိုရင် ေလးစားပါတယ်။ ပညာတတ်ဆို လစာလည်း ပိုရပါတယ်။ အစိုးရ၀န်ထမ်းတစ်ေယာက်ရဲ့ လစာဟာ ေဖာေဖာသီသီ မရေပမယ့် တစ်ပတ်တစ်ခါ သူငယ်ချင်းေတွနဲ့ ဘီယာဆိုင် အသာေလးသွားေပျာ်လို့ရေအာင်ေတာ့ လုံေလာက်ပါတယ်။ ေကျာင်းဆရာလုပ်ေနတဲ့ သူတစ်ေယာက်စားတဲ့ဆိုင်နဲ့ ကုမ္ပဏီသူေဌးစားတဲ့ဆိုင် အတူတူပါပဲ။ စားလည်း စားနိုင်ြကပါတယ်။ ထိုင်းမိန်းကေလး သူငယ်ချင်းေတွကို ကျွန်တာ် ြမန်မာကားတစ်ကား ြပဖူးပါတယ်။ မိဘက သူေဌး အဖိုးြကီးနဲ့ ေပးစားတဲ့အခန်းမှာ ဘာေြပာလဲဆိုတာ့ `Stupid Parent´ တဲ့။ သူတို့နိုင်ငံမှာ ဒါမျိုးရှားပါတယ်တဲ့။ ကျွန်ေတာ်တို့ နိုင်ငံမှာ ရှားသလား ေပါသလား။ မိဘေတွရဲ့ဆန္ဒက ဘယ်လိုလဲဆိုတာ ကျွန်ေတာ်ကိုယ်တိုင်က မိဘတစ်ေယာက် မြဖစ်ေသးေတာ့ မခံစားတတ်ေသးဘူးဗျာ။
ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ ကျွန်ေတာ့်အြမင်(၁၅)ကိုလင်းဦးအြမင်က မှန်ပါတယ်။မိန်းကေလးေတွ ကိုယ့်အိေြန္ဒကိုယ် မထိန်းသိမ်းေတာ့ဘူးဆိုတာကလည်း မြဖစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါ။
အရာအားလံုးဟာ ေြပာင်းလဲေနတယ်ဆိုတာက ဟုတ်ပါတယ်။
ကိုစည်သူေြပာတာလဲ မှန်တယ် ..
ဒါေပမဲ့ ကိုလင်းဦးေရ ..
အဲဒီအေြကာင်းေတွလည်း ေရးေပးပါဦး ..
အမှန်ပဲ ကိုလင်းဦးေရ. ဒီေဆာင်းပါးေလး သိပ်ေကာင်းတယ်ဗျာ။ ကျွန်ေတာ် ေြပာချင်တာေတွ ေတာ်ေတာ်များများ ဒီထဲမှာ ပါတယ်ဗျို့.။
အသက်နဲ့ လူလုပ်တာ ဆိုတဲ့ သူေတွ (အထူးသြဖင့် မိန်းကေလးေတွ) တစ်ေန့ထက် တစ်ေန့ များများ လာတာ သိပ်ေကာင်းတဲ့ ကိစ္စေတာ့ မဟုတ်ဘူးဗျ။
ေနရာတစ်ကာ ရင်ဖံုးနဲ့ ြကိုးြကီးချိတ်နဲ့ ေရွှေပးလို့ မရတဲ့ ဣေြန္ဒမျိုးလုပ်ေနရမယ် မဆိုလိုပါဘူးဗျာ။ ဒါေပမယ့် ေနရာတိုင်းမှာ ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာ ဆိုတာေလး နည်းနည်းစီ ထည့်စဉ်းစားြပီး လုပ်မယ်ဆိုရင်ေတာ့ အေကာင်းဆံုးပဲေပါ့။
ဒူးေနရာဒူးေတာ်ေနရာေတာ် .၀တ်စားေနထိုင်ရမှာေပါ့ေနာ်.ဘယ်ေလာက်ပဲေခတ်မီတိုးတက်ေနပါေစ..ေခတ်မလွန်သင့်ဘူးေပါ့ေနာ်.. ြမန်မာမေလးတစ်ေယာက်ြဖစ်ရတာ အရမ်းကိုဂုဏ်ယူစရာပါ. အကို့ပိုစ်ထဲက မိဘေတွရဲ့ပံုစံမျိုးေလးေတွအနည်းနဲ့အများ ေတွ့ေနရပါတယ်. သမီးမိန်းကေလးတစ်ေယာက်အတွက် မိခင်ရဲ့အုပ်ထိန်းမှုကအရမ်းအေရးြကီးပါတယ်. ဖခင်ကိုလည်းေလးစားမှပါေလ.. အဓိက ကေတာ့ေငွတစ်ခုတည်းနဲ့ အရာရာမြပီးေြမာက်နိုင်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ။ ေကျးဇူးကမ္ဘာ.